အခုနွေရာသီမှာ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲဖို့ရှိနေတဲ့ ကစားသမားများ
2 Aug 2018 . 2:16 PM
အာဆင်နယ်အသင်းကတော့ အခုနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာ ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတွေနဲ့ တော်တော်လေး အလုပ်များနေတယ်။ အခုလောလောဆယ်အထိ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေက ၀ဲလ်ရှိုင်းယား Wilshere ၊ ကာဇိုလာ Cazorla တို့ဖြစ်ပြီး နည်းပြသစ်အူနိုင်းအမ်မရီ Unai Emery က ကစားသမားသစ်တွေ ခေါ်ယူအားဖြည့်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေဆဲပါ။ နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ကာလပိတ်ဖို့က (၇)ရက်လောက်သာလိုတော့တာကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းအနေနဲ့ ကစားသစ်တွေကို ခပ်သွက်သွက်ခေါ်ဖို့ လိုနေပါပြီ။ အာဆင်နယ်အသင်းကို ဘယ်ကစားသမားသစ်တွေ ရောက်မလဲဆိုတာ မသိရသေးပေမယ့် ဒီနွေရာသီကာလအတွင်း အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့ နီးစပ်နေတဲ့ကစားသမားတွေတော့ ခန့်မှန်းလို့ရနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
လူးကပ်စ်ပီရက်ဇ် Lucas Perez
အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲဖို့ နီးစပ်နေတဲ့ကစားသမားထဲမှာ တိုက်စစ်မှူးလူးကပ်စ်ပီရက်ဇ်လည်း အပါအ၀င်ပါ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ဒီပို့တီဗိုအသင်းကနေ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ လူးကပ်စ်ပီရက်ဇ်ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ပုံမှန်ကစားခွင့်ပျောက်ဆုံးခဲ့သလို ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အသင်းဟောင်းဒီပို့တီဗိုအသင်းဆီ အငှားနဲ့ သွားကစားခဲ့ရတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် (၂၁)ပွဲကစား (၇)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့ လူးကပ်စ်ပီရက်ဇ်ကို ဖီအိုရင်တီးနားအသင်းက ပေါင်(၇)သန်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ နီးစပ်နြေ့ပီလို့လည်း သတင်းတွေထွက်နေတယ်။
အာဆင်နယ်အကယ်ဒမီထွက် အင်္ဂလန်လူငယ် တိုက်စစ်မှူးအက်ပွန်း Akpom ဟာ ဒီနွေရာသီမှာ အာဆင်ကစားသမားဘ၀ကို အဆုံးသတ်ဖို့ နီးစပ်နေပြီ။ အခုအချိန်အထိ စီနီယာအသင်းအတွက် ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရသေးဘဲ ကလပ်အသင်းတော်တော်များများမှာ အငှားသွားကစားခဲ့ရပြီး နည်းပြအူနိုင်းအမ်မရီက သူ့ကို ရောင်းချဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီဖြစ်သလို ဂရိကလပ် PAOK အသင်းက ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမားဖြစ်တဲ့ ရမ်ဆေးဟာ အခုကစားသမားအထွက်စာရင်းမှာ ပါဝင်နေတာကတော့ တကယ့်ကို အံ့အားသင့်စရာပါ။ ရမ်ဆေးအနေနဲ့ ဆုဖလားမျှော်လင့်ချက်တွေအတွက် အာဆင်နယ်အသင်းကို စွန့်ခွာလိုနေတာဖြစ်ပေမယ့် လန်ဒန်မြေမှာပဲ ဆက်ရှိသွားဖို့ရှိနေပြီး ချယ်လ်ဆီးအသင်းက သူ့ကို ပစ်မှတ်ထားနေတယ်။
ဒီကစားသမား(၃)ဦးကတော့ အခုနွေရာသီမှာ အသင်းအပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ အများဆုံးကစားသမားတွေပါပဲ။ အဲဒီကစားသမားထဲက ဘယ်သူများ အာဆင်နယ်ကစားသမားဘကို နိဂုံးချုပ်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ . . .
အခုနှရောသီမှာ အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ လမျးခှဲဖို့ရှိနတေဲ့ ကစားသမားမြား
အာဆငျနယျအသငျးကတော့ အခုနှရောသီအပွောငျးအရှမှေ့ာ ကစားသမားအပွောငျးအရှကေိ့စ်စတှနေဲ့ တျောတျောလေး အလုပျမြားနတေယျ။ အခုလောလောဆယျအထိ အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ လမျးခှဲခဲ့တဲ့ကစားသမားတှကေ ဝဲလျရှိုငျးယား Wilshere ၊ ကာဇိုလာ Cazorla တို့ဖွဈပွီး နညျးပွသဈအူနိုငျးအမျမရီ Unai Emery က ကစားသမားသဈတှေ ချေါယူအားဖွညျ့ဖို့ ကွိုးပမျးနဆေဲပါ။ နှရောသီ အပွောငျးအရှကေ့ာလပိတျဖို့က (၇)ရကျလောကျသာလိုတော့တာကွောငျ့ အာဆငျနယျအသငျးအနနေဲ့ ကစားသဈတှကေို ခပျသှကျသှကျချေါဖို့ လိုနပေါပွီ။ အာဆငျနယျအသငျးကို ဘယျကစားသမားသဈတှေ ရောကျမလဲဆိုတာ မသိရသေးပမေယျ့ ဒီနှရောသီကာလအတှငျး အသငျးနဲ့လမျးခှဲဖို့ နီးစပျနတေဲ့ကစားသမားတှတေော့ ခနျ့မှနျးလို့ရနပွေီဖွဈပါတယျ။
လူးကပျဈပီရကျဇျ Lucas Perez
အာဆငျနယျအသငျးနဲ့ လမျးခှဲဖို့ နီးစပျနတေဲ့ကစားသမားထဲမှာ တိုကျစဈမှူးလူးကပျဈပီရကျဇျလညျး အပါအဝငျပါ။ ၂၀၁၆ ခုနှဈက ဒီပို့တီဗိုအသငျးကနေ ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ လူးကပျဈပီရကျဇျဟာ အာဆငျနယျအသငျးမှာ ခွစှေမျးပွနိုငျခွငျးမရှိဘဲ ပုံမှနျကစားခှငျ့ပြောကျဆုံးခဲ့သလို ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက အသငျးဟောငျးဒီပို့တီဗိုအသငျးဆီ အငှားနဲ့ သှားကစားခဲ့ရတယျ။ အာဆငျနယျအသငျးအတှကျ (၂၁)ပှဲကစား (၇)ဂိုးသှငျးယူခဲ့တဲ့ လူးကပျဈပီရကျဇျကို ဖီအိုရငျတီးနားအသငျးက ပေါငျ(၇)သနျးနဲ့ချေါယူဖို့ နီးစပျနွပေီ့လို့လညျး သတငျးတှထှေကျနတေယျ။
အာဆငျနယျအကယျဒမီထှကျ အင်ျဂလနျလူငယျ တိုကျစဈမှူးအကျပှနျး Akpom ဟာ ဒီနှရောသီမှာ အာဆငျကစားသမားဘဝကို အဆုံးသတျဖို့ နီးစပျနပွေီ။ အခုအခြိနျအထိ စီနီယာအသငျးအတှကျ ပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့မရသေးဘဲ ကလပျအသငျးတျောတျောမြားမြားမှာ အငှားသှားကစားခဲ့ရပွီး နညျးပွအူနိုငျးအမျမရီက သူ့ကို ရောငျးခဖြို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပွီဖွဈသလို ဂရိကလပျ PAOK အသငျးက ကွိုးပမျးနပေါတယျ။
အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ အဓိက ကစားသမားဖွဈတဲ့ ရမျဆေးဟာ အခုကစားသမားအထှကျစာရငျးမှာ ပါဝငျနတောကတော့ တကယျ့ကို အံ့အားသငျ့စရာပါ။ ရမျဆေးအနနေဲ့ ဆုဖလားမြှျောလငျ့ခကျြတှအေတှကျ အာဆငျနယျအသငျးကို စှနျ့ခှာလိုနတောဖွဈပမေယျ့ လနျဒနျမွမှောပဲ ဆကျရှိသှားဖို့ရှိနပွေီး ခယျြလျဆီးအသငျးက သူ့ကို ပဈမှတျထားနတေယျ။
ဒီကစားသမား(၃)ဦးကတော့ အခုနှရောသီမှာ အသငျးအပွောငျးအလဲဖွဈဖို့ အမြားဆုံးကစားသမားတှပေါပဲ။ အဲဒီကစားသမားထဲက ဘယျသူမြား အာဆငျနယျကစားသမားဘကို နိဂုံးခြုပျမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ . . .